laptop အစိတ်အပိုင်းများကိုမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:မဂ္ဂနီစီယမ်၏ Semisolid သေကာစ်,High Quality Laptop ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း,laptop အစိတ်အပိုင်းများကာစ် Die
Home > ထုတ်ကုန်များ > မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ် > semi Solid သေကာစ် > laptop အစိတ်အပိုင်းများကိုမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း
laptop အစိတ်အပိုင်းများသတ္တုများပုံသွန်း rheological သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့် thixotropic သတ္တုများပုံသွန်းသို့ကွဲပြား, laptop အစိတ်အပိုင်းများကိုမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း, Semi-အစိုင်အခဲ ချ. သေဆုံးလျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့တိုတောင်းဖြစ်စဉ်ကိုမြင့်မားထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု, အများဆုံးအဆင့်မြင့် rheology သတ္တုများပုံသွန်း, High-အရည်အသွေး Laptop ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်အသုံးပြုနှင့်မြင့်မားသောဖိအားများနှင့်မြင့်မားသောဖိအား mode ကိုကသတ္တုမှိုသို့တစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲပြည်နယ်သို့အလင်းအလွိုင်းမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းပစ္စည်းအပူ။ မြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆမြင့်မားခွန်အားတောင့်တင်းမြင့်မားတိ (0.1mm-0.01mm မှတိကျအထိ), ချောမျက်နှာပြင်ပေါ့ပါးအလင်းအလေးချိန်, ချေးခုခံမရှိညစ်ညမ်းမှု, အစစ်အမှန်ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုတိကျသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း, အစိတ်အပိုင်းများကိုပေါ့ပါးနှင့်အတူထုတ်လုပ်ကုန်ပစ္စည်းများ။
အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးသောမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်အိုင်တီလုပ်ငန်းနယ်ပယ်, မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်း, ဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း, လေကြောင်းနှင့်အာကာသ, မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်, တိကျတူရိယာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ထိုကဲ့သို့သော "အရည်အသွေးမြင့်မားမြင့်မားထိရောက်မှု, စွမ်းအင်ကဲ့သို့သောအခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည် ချွေတာ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး "။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအထူးမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းအတွက်စေ့စပ်, 101 ကိရိယာများမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း Semi-အစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းစက်ရှိတယ်။ ဒါဟာယခုကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံး Semi-အစိုင်အခဲထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၏ထုတ်လုပ်မှု၏နှစ်ပေါင်းများစွာရှိသည်, အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆေးထိုးတန်ဆာအတွေ့အကြုံ, တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်စဉ်ကိုတက်လိုက်လျှောက်ရန်အထူးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိပါတယ်, အမြဲတမ်းထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်ဖောက်သည်များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဟောင်ကောင် Jinrun Co. , Ltd အော်တို tool ကိုမှို, မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ဆေးထိုးတန်ဆာနှင့်အခြားအပြောင်းအလဲနဲ့န်ဆောင်မှုများ ချ. သေဆုံး, Semi-အစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းအထူးရိုးရာသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း။ 120 သန်း၏မှတ်ပုံတင်မြို့တော်ဂွမ်ဒေါင်းရဲ့သော့ချက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတရုတ်နိုင်ငံ၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းများသို့တီထွင်နှင့်လွတ်လပ်သောသွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်၏ညာဘက်ရှိပါတယ်သိရသည်။
ဟောင်ကောင် Jin ကပြေး Co. , Ltd, နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဂရုစိုကျ 100 နီးပါးကလူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ R & D အဖွဲ့သည်ရှိပါတယ်, 18 စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုမူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်းနှင့် R & D အဖွဲ့သည်ဖောက်သည်ရဲ့လှည့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေသည် စုံလင်သောထုတ်ကုန်သို့စိတ်ကူး။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ယင်း BSI certified ရရှိထားပြီး ISO9001 မှတစ်ဆင့်: 2008, ISO14001: 2004 နှင့် TS16949 အရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, ကုမ္ပဏီမြင့်မားတဲ့စံနှုန်းစစ်ဆေးရေးတူရိယာများနှင့်စက်ကိရိယာများတပ်ဆင်ထားတဲ့ရင့်ကျက်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းဓာတ်ခွဲခန်းရှိပါတယ်။ ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးဖောက်သည်၏ထုတ်ကုန်များ၏သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုအရသိရသည်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးသေချာစေရန်အာမခံနိုင်ပါတယ်။ ရှစ်ဖြစ်စဉ်များစက်ရုံဧရိယာထဲမှာပြီးစီးခဲ့နေကြတယ်, တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်စဉ်ကိုတက်အတိုင်းလိုက်နာရန်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသူတစ်ဦးရှိပါတယ်, အမြဲတမ်းထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်ဖောက်သည်များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဖောက်သည်နမူနာအတည်ပြုခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ကုမ္ပဏီများအမြောက်အများနှင့်ပို့ကုန်အတွက်သူတို့ကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။